Izindiza ZaseNingizimu Afrika: Izindiza ezisuka eGoli ziya eMauritius manje
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Izindiza ZaseNingizimu Afrika: Izindiza ezisuka eGoli ziya eMauritius manje
Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika • Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zaseMauritius Breaking • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • INingizimu Afrika Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
Izindiza ZaseNingizimu Afrika: Zindiza usuka eGoli uye eMauritius manje
I-SAA manje isisondela enyangeni yayo yokuqala yokusebenza ngezindiza zasendaweni ezisuka eGoli ziye eKapa futhi esifundeni ziya e-Accra, Kinshasa, Harare naseLusaka. Insizakalo yeMaputo yansuku zonke iqala ngoDisemba 2021.
IMauritius inobudlelwano obuqinile neNingizimu Afrika futhi yomibili iyindawo edumile yezokuvakasha nezamabhizinisi.
Isu le-SAA lomzila lihlale liqashwe futhi lihlolwe ngokuhambisana necebo lokusindisa ngemuva kwebhizinisi lokusimama nokwenza inzuzo.
I-SAA iyakujabulela ukuqala kabusha izinsizakalo zayo eMauritius, phambilini ebidume futhi inenzuzo.
ISouth African Airways (SAA) iyaqhubeka nokwakha inethiwekhi yayo ngokuqala kabusha kokusebenza eMauritius kusukela ngoNovemba 21, 2021. Izindiza ekuqaleni zizosebenza kabili ngesonto ngoLwesithathu nangeSonto, zisuka IGoli i-OR Tambo International (ORTIA) ngo-09: 45 ekuseni nezindiza ezibuya eMauritius ngo-04: 35 ntambama.
South African Airways Isikhulu esiphezulu sesikhashana uThomas Kgokolo uthi, “Ingxenye yecebo lethu lokukhula ukuhlonza imizila lapho kunesidingo futhi engaba yinzuzo kulowo ophethe. Ukuqaliswa kabusha kwezinsizakalo eMauritius kuhlangabezana nazo zombili lezo zindlela. Ngaphezu kwalokho, izwe linobudlelwano obuqinile neNingizimu Afrika futhi liyindawo evamile yezokuvakasha kanye nebhizinisi. Siyaqiniseka ukuthi ithikithi elizothathwa lizoqina, ikakhulukazi njengoba isikhathi sehlobo sisondela. ”
SAA manje isondela inyanga yayo ephelele yokusebenza nezindiza zasendaweni ezivela kwa-Jsifiso kuya Cape Town futhi esifundeni kuya e-Accra, Kinshasa, Harare naseLusaka. Insizakalo yeMaputo yansuku zonke iqala ngoDisemba 2021.
UKgokolo uthi amasu emizila ahlala njalo abhekiwe futhi ahlolwe ngokuhambisana necebo lokutakula ngemuva kwebhizinisi lokusimama nokwenza inzuzo.
"Lokhu kungumkhuba ozwakalayo owamukelwa yizindiza emhlabeni wonke uma ubheka isimo sezulu esinzima okusebenza kuso le mboni. Ngokuya ngokuya ezindaweni zamanje nalapho kunesidingo khona esikhathini esizayo, sizokwengeza futhi sisuse imizila."
Kusho uKgokolo SAA kuyakujabulisa ukuqala kabusha izinsizakalo eMauritius, phambilini ebidume futhi inenzuzo.
Isikhathi sokundiza nokubuya ezweni sicishe sibe amahora amane.